कान्तिपुरका मालिक सिरोहियाको सोल्टी होटल ‘रुम नम्बर ९२८’ काण्ड के हो ? - दर्पण संसार
कान्तिपुरका मालिक सिरोहियाको सोल्टी होटल ‘रुम नम्बर ९२८’ काण्ड के हो ?
२०७७ भाद्र ३०, मंगलबार ०७:१६ बजे
काठमाडौं । । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियासँग जोडिएको सोल्टी होटल ‘रुम नम्बर ९२८’ को प्रसंगले केही दिन सामाजिक सञ्जाल मज्जाले गर्मायो ।
रियूमर फैलाउने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय फेक आइडी होल्डरदेखि गिने चुनेका पत्रकारसमेत घटनाको पक्ष/विपक्षमा भिडे । तर, यथार्थ पहिल्याउँदै जाँदा घटनाको पटाक्षेप अर्कैतर्फ मोडिन पुगेको छ ।
प्रहरीका अनुसार सिरोहियासँग जोडिएको सोल्टी होटलको ‘रुम नम्बर ९२८’ प्रसंगको स्रोत नेपाली नभई नेपालीमूलका अमेरिकी हुन् । जो टेक्सासमा बस्दै आएका छन् । उनको नाम विनोद नेपाल हो ।
स्थायी घर भने स्याङ्जा । कांग्रेसका कार्यकर्ता रहेका उनीले विगतमा स्याङ्जाबाटै काँग्रेसको राजनीति गर्थे । यसक्रममा उनी काँग्रेसका महासमिति सदस्यसमेत भएका थिए । अमेरिका पुगेपछि भने उनी नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकासँग आवद्ध छन् ।
प्रहरीका अनुसार सुरुमा उनैको ट्वीटर ह्याण्डलबाट सिरोहियासँग जोडिएको प्रसंग बाहिर आयो । ‘एयरलाइन्समा कार्यरत शर्मिला नामकी युवतीलाई सोल्टी होटलको कोठा नम्बर ९२८ मा बोलाएर सिरोहियाले असामाजिक गतिविधि गरेको मात्र नभई पहुँचका आधारमा पीडित युवतीको मुखसमेत बन्द गरेको’ बिषय ट्वीटरमा उल्लेख थिए । सोही प्रसंग ‘सिधा कुरा’ नामको ट्वीटर ह्याण्डले अजय सुमार्गीका श्रीमती अस्मिता र छोरा अरुणराजसमेतलाई मेन्सन गरेर पोष्ट गर्‍यो ।
प्रसंग एकाएक भाइरल बनेपछि सिरोहियाले घटना झुटा रहेको भन्दै ट्वीट गरे । तर, आलोचना मत्थर भएन । अझ उग्र हुन थाल्यो । घटनाबाट चिन्तित सिरोहियाले साइवर अपराधअन्तर्गत नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा जाहेरी दिए ।
ब्यूरोले छानबिन कार्यलाई तत्काल अघि बढायो । प्रहरीको अर्को अनुसन्धान ‘वुइङ्स’ अपराध अनुसन्धान महाशाखाले पनि गोप्यरूपमा अनुसन्धान गर्‍यो । दुवैको अनुसन्धान गएर अमेरिकाको टेक्सासमा गएर ठोक्कियो । जहाँबाट उक्त प्रसंग पोष्ट भएको थियो ।
‘जाहेरीलगत्तै हामीले अनुसन्धन थाल्यौं । पहिल्याउँदै जाँदा उक्त प्रसंगको पोष्ट अमेरिकाको टेक्सासबाट भएको भेटियो । पोष्ट भने विनोद नेपाल नामको ट्वीटर ह्याण्डलबाट भएको देखिन्छ’, अनुसन्धानमा संलग्न ब्यूरो स्रोतले भन्यो, ‘घटना सम्बन्धमा अझै अनुसन्धान हुँदैछ । करिब करिब हामी सत्यको नजिक पुगेका छौँ ।’
प्रहरीका अनुसार पोष्टकर्ता विनोदलाई पक्राउ गर्न अ‍ेमेरिकास्थित नेपाली दूतावासमार्फत पहल भइरहेको छ । यसका लागि पत्राचारसमेत भइसकेको प्रहरीको दाबी छ ।
ब्यूरो स्रोतले भन्यो, ‘पोष्ट गर्ने अमेरिकामा रहेको पुष्टि भयो । उसलाई तुरुन्तै पक्राउ गर्न सकिने अवस्था भएन । तर, हाम्रो त्यहाँ दूतावास छ । सोहीमार्फत पहल भइरहेको छ । यसका लागि पत्रचारसमेत भइसकेको छ ।’
सामाजिक सञ्जालमा प्रसंग एकाएक भाइरल बनेपछि प्रहरीले घटनास्थलको बारेमा अनुसन्धान पनि गरेको थियो । यसका लागि प्रहरी सोल्टी होटल पुगेको थियो । तर, पोष्टमा उल्लेखित ‘रुम नम्बर ९२८’ होटलमै फेला परेन ।
यस कुराबाट रन्थिनिएका प्रहरी त्यसपछि भने घटनास्थलबाट फर्किएका थिए । घटनाको अझ गहिराइसम्म पुग्न प्रहरीले विवादित व्यक्तिको सिडिआर विश्लेषण गर्नुपथ्र्यो । तर, प्रहरीले यसतर्फ भने खासै ध्यान दिएको छैन ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘घटनाको गोप्यरुपमै अनुसन्धान गर्न टेलिकममा सिडिआर लिन भनेका छौँ । तर, ठूलाबडाको त्यहाँ पनि सुराकी हुँदारहेछन् ।
सुचना लिक हुने सम्भवना बढेपछि हामीले विवादित व्यक्तिको सिडिआर नै लिन सकेनौँ ।’ समाचार स्रोतका अनुसार अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट उक्त घटना कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले गरिएको जस्तो देखिए पनि उनको चरित्रहत्या गर्नुको उद्देश्य पछाडिको रहस्य थाहा हुनसकेको छैन । साभार : drishtinews.com